Wasiir katirsan Xukuumada Somalia oo dhaliilay Balan qaad uu sameeyay Madaxweyne Farmaajo - iftineducation.com
Wasiir katirsan Xukuumada Somalia oo dhaliilay Balan qaad uu sameeyay Madaxweyne Farmaajo
iftineducation.com – Wasiiru-Dowlaha Madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa aragti ahaan dhaliilay balan qaad uu sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo ku aadanaa in qofkii soo sheegaya gaari qarxa la abaal marinayo.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka ayuu Mahad Salaad ku dhaliilay balanqaadka 100-ka kun dollar uu Madaxweynaha Soomaaliya u sameeyay qofkii keena xogta gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa labo mar balan qaaday in lacag dhan 100-kun dollar la siinayo cidii keenta xogta gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo la doonayo in weerar ku geestaan Al Shabaab.
Qoraalka uu Wasiir Mahad Salad soo dhigay bartiisa ayaa u qorneed sida tan:
QOFKII SOO SHEEGA BAABUUR QARAX SIDA WAXAA LA SIIN DOONAA $100,000 DOLLAR”.!!
Aniga waxay ila tahay Soomaaliya Amnigeeda inaan lagu sugi karin lacag la bixiyo ee waxaan u baahanahay ISTAATIIJIYAD QARAN OO LEH MUG DHAQAALE, MUG CIIDAN IYO MUG ABAABUL BULSHADEED. Sababaha soo Socda:
Sababta 1aad: Kaba soo qaad bishii inla soo sheego TOBAN QARAX. Qarashka ku baxaya waxa uu noqonayaa hal million dollar. Qarashkaasna kama go’i karo Miisaaniyada Dowlada oo ku tiirsan oo kaliya lacagaha kasoo xarooda Dekada iyo Airport Magaalada Mogadishu iyo deeqaha laga sugayo Dowladaha Ajnabiga ah oo iyadana ku xiran shuruudo adag, ayna adagtahay inla fuliyo.
Sababta 2aad: Waxaa jiri kara Hay’ado iyo shaqsiyaad ka ganacsada qaraxyada been abuurka ah ee marar badan la sheego inla qabtay. Marka waxay dhiiragelin u noqon kartaa SUUQA MADOW EE KA GANACSIGA QARAXYADA.
Sababta 3aad: qarashkaas la bixinayo waxay kooxaha Nabad Diidka ah u isticmaali karaan maalin gelinta Qaraxyadooda.
Baabuurta qaraxyada ay u isticmaalaan kooxaha Nabad Diidka ah qiimo ahaan waxay u dhaxeeyaan $5,000 ilaa $15,000 dollar. Marka waxaa suuragal ah inta soo sheegaan hal gaari inla siiyo lacagtii ay ku meel gelin lahaayeen 10 gaari oo kale.
Sidaas daraadeed waxaan qabaa la dagaalanka Kooxaha Nabad Diidka inay u baahantahay ISTARAATIIJIYAD KA BALAARAN LACAG LA BIXIYO. Ayuu qoraalkiisa kusoo gabo gabeeyay qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay.
Maxaad kala socotaa Madaxda kasoo qeyb galeysa Caleemo Saarka Farmaajo iyo Wadamada ay ka socdaan?